बहुअपाङ्ग सन्तोषलाई घरमै नागरिकता ! - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
बहुअपाङ्ग सन्तोषलाई घरमै नागरिकता !
आवाज अनलाइन १३ माघ २०७५, आईतवार
दोलखा, माघ १३
बालक जस्तै देखिने भए पनि सन्तोष २१ वर्षीय युवक हुन् । तर बहुअपाङ्गता भएका कारण उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बाहिरफेर निस्कन नसक्ने सन्तोषले अहिले घरमै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छन् ।
शैलुङ गाउँपालिकामा सञ्चालित घुम्ती शिविरको क्रममा शैलुङ ३ का सन्तोष श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले नागरिकताको प्रमाणपत्र घरमै गएर प्रदान गरेका हुन् । बोकेर कतै लैजान समेत कठिनाइ भएको र ‘एकै डल्लो’ परेका उनलाई घरमै गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको प्रजिअ पाठकले बताए । उनले अपाङ्गताको प्रमाणपत्र भने यसअघि नै पाइसकेका छन् ।
शैलुङ गाउँपालिका ३ ल्याङ्सालका २१ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठ जन्मँदै लुला थिए । सन्तोषकी आमा छत्रकुमारीका अनुसार त्यतिबेला उनको हात गोडा चल्दैनथ्यो तर ६ महिनापछि उनीमा बहुअपाङ्गता भएका थाहा भयो । अहिले उनै ७/८ वर्षका जस्ता देखिन्छन् ।
‘जिउ एकै डल्लो परेको छ ।’ उनकी आमा छत्रकुमारीले भनिन्, हिँडडुल गर्न त परै जाओस्, खाना पनि अरुले खुवाउनुपर्छ । उसको हेरचाह एक जना सधैँ खटिरहनु पर्छ ।’ उनी बोल्न समेत सक्दैनन् । शरीरका कुनै पनि अङ्ग नचल्ने उनको वृद्धि र विकास दुवै रोकिएको छ । तीन वर्षअघिसम्म हात गोडा अलिअलि चले पनि तीन वर्षदेखि एकै डल्लो परेको सन्तोषकी फुपू मीनालक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् ।
२०७२ को विनासकारी भूकम्पमा सन्तोषले आफ्ना बाबु गुमाए । सन्तोषका बाबु जीवित छँदा काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा लगेर जँचाएका थिए । कुनै पनि अस्पतालले रोग पत्ता नलगाएपछि औषधी पनि नदिएको उनले बताइन् । सवारी चालकको पेशा गर्ने सन्तोषका बाबु तिलकको बाह्रबिसेमा भूकम्पको पहिरोमा परी मृत्यु भएको थियो । उनकी आमाले भनिन्, ‘उसको बाबु बितेपछि हामीले आसै मा¥र्यौँ ।’ छत्रकुमारीका २ छोरा र २ छोरीमध्ये सन्तोष जेठा हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आयोजनामा शैलुङ गाउँपालिकाको देउरालीमा सञ्चालित घुम्ती शिविरमा सन्तोषसँगै १०४ जनाले नागरिकता लिएको थिए । त्यसैगरी ९६ जनाले मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाएका थिए । दुई दिने शिविरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले ८१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । शीतोष्ण फलफुल तथा वागवानी विकास केन्द्रले २२० जना कृषकहरुलाई तरकारी मिनी किट वितरण ग¥यो भने नेपाल टेलिकमले मोबाइलको सिमकार्ड तथा टेलिफोन लाइन वितरण गरेको थियो । किवी जोन, नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले परामर्श सेवा प्रदान गरेका थिए ।